Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - SS 1T 2017
NY FANAHY MASINA SY NY FIAINANA ARA-PANAHY
JANOARY - FEBROARY - MARTSA
Lesona 1 NY FANAHY MASINA SY NY BAIBOLY 31/12 - 06/01
Lesona 2 MIASA AO AMBADIKY NY SEHATRA 07/01 - 13/01
Lesona 3 NY MAHA-ANDRIAMANITRA NY F.M. 14/01 - 20/01
Lesona 4 IZA MOA NY FANAHY MASINA? 21/01 - 27/01
Lesona 5 NY BATISA SY NY FANAHY MASINA 28/01 - 03/02
Lesona 6 NY F.M. SY NY FIAINAM-PAHAMASINANA 04/02 - 10/02
Lesona 7 NY VOKATRY NY FANAHY 11/02 - 17/02
Lesona 8 NY FANAHY MASINA SY NY ZAVA-PANAHY 18/02 - 24/02
Lesona 9 NY FANAHY MASINA SY NY FIANGONANA 25/02 - 03/03
Lesona 10 NY F.M., NY BAIBOLY ARY NY VAVAKA 04/03 - 10/03
Lesona 11 MAMPALAHELO SY MANOHITRA NY F.M. 11/03 - 17/03
Lesona 12 NY ASAN'NY FANAHY MASINA 18/03 - 24/03
Ny fomba hanampian’ny Fanahy Masina antsika hanana fiainana feno zava-panahy
Ny ankamaroantsika dia efa nandre avokoa ny teny hoe: “Izaho manao batisa anao amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.” Ary ny olona tsirairay izay efa natao batisa dia efa nandre ireo teny ireo mialoha indrindra ny hanitrihan’ny mpitandrina azy ao anatin’ny rano (vakio ny Mat. 28:19).
Eritrereto indray ireo teny ireo: atao batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Eny, voatonona miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy.
Zavatra tsy mahagaga izany. ny foto-pinoan’ny fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, laharana fahadimy, “Andriamanitra Fanahy Masina” dia manampy antsika hahatakatra ny anton’izany. Toy izao no voalaza ao: “Maharitra mandrakizay ny Fanahy Masina. Niara-niasa tamin’ny Ray sy ny Zanaka Izy raha namorona izao tontolo izao Izy ireo. Ny Fanahy no nahatonga an’i Jesôsy ho nofo. Miara-miasa amin’Andriamanitra Ray sy i Jesôsy Izy mba hamonjena antsika. Izy no nitari-dalana ireo mpanoratra ny Baiboly mba hanoratra ny Tenin’Andriamanitra. Nameno hery ny fiainan’i Kristy Izy. Mitarika ny olona marobe ho eo amin’i Kristy ny Fanahy Masina, Izy no mameno ny olona amin’ny faniriana ny handray an’i Kristy. Ny Fanahy Masina no manova ny fiainan’ireo rehetra izay manaiky ny antson’Andriamanitra. Ny Fanahy Masina no manampy azy ireo hiaina ny fiainan’i Kristy. Nalefan’ny Ray sy ny Zanaka ho amin’ny zanany mandrakariva ny Fanahy Masina. Avy amin’ny Fanahy Masina ny fanomezam-pahasoavana azon’ny fiangonana. Manome fahefana ny fiangonana Izy mba hanampiana ny mpino hijoro ho vavolombelona amin’ny hafa ny amin’ny fitiavan’i Kristy. Mifanaraka tsara amin’ny Baiboly ny Fanahy Masina. Izy no mitarika ny fiangonana ho amin’ny fahamarinana rehetra.”
Ao amin’ny Baiboly isika dia mahita ny momba ny asan’Andriamanitra Ray. Eny rehetra eny ny asany. Hitantsika manokana izany asany izany ao amin’ny TT. Ao amin’ny TV, indrindra ao amin’ny Filazantsara, dia hitantsika hatrany hatrany ny mikasika ny asa nataon’i Jesôsy, ilay Zanaka. Ny Filazantsara dia miresaka momba ny fiainany, ny fahafatesany, ary ny asa ataony ho an’Andriamanitra any an-danitra. Araka izany, dia i Jesôsy no ampahany manan-danja indrindra ao amin’ny TV.
Ny asan’ny Fanahy Masina kosa dia tsy miseho mazava, koa dia tsy hitantsika mazava tsara izany. Ny asa ataon’ny Ray sy ny Zanaka no tena hitantsika bebe kokoa.
Misy antony izany fahasamihafana izany. Tsy miezaka hanao izay ifantohana indrindra Aminy tsy akory ny Fanahy Masina. Any ambadiky ny sehatra kokoa Izy no miasa, tahaka ny hita any amin’ny sehatra fanaovana tantara an-dampihazo. Ny Baiboly dia maneho amintsika mazava kokoa ilay Andriamanitra Ray sy ny Zanany, mihoatra noho ny fanehoany amintsika ny Fanahy Masina. Araka izany, ny Fanahy Masina dia tsy hoe eo mba hampitodika antsika Aminy, fa mba hampitodika antsika amin’i Jesôsy sy izay nataon’i Jesôsy ho antsika.
Amin’ity telovolana ity isika dia hianatra ny asan’ny Fanahy Masina, ary hianarantsika ny maha-zava-dehibe Azy eo amin’ny fanandramana kristianina iainantsika. Andriamanitra rahateo ny Fanahy Masina. Tsy misy mahalala an’Andriamanitra toa Azy. Afaka maneho an’Andriamanitra amintsika amin’ny fomba iray ny Fanahy Masina, mba hahafahantsika miankina sy mitoky Aminy. Ohatra iray amin’izany, ny Fanahy Masina no nanome tsindrimandry ireo mpanoratra ny Baiboly, ary amin’izao androntsika izao dia mitari-dalana antsika amin’ny fandinihana ny Baiboly Izy. Manao izany amin’ny fomba maro Izy. Manome antoka antsika ny amin’ny famonjena antsika amin’ny alalan’i Jesôsy Kristy ny Fanahy Masina (Rôm. 8:16). Manome porofo momba ny asan’Andriamanitra ao amintsika Izy (1 Jao. 3:24). Manadio antsika ho afaka amin’ny fahotana ny Fanahy Masina, ary manamasina antsika. “Ary mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa hianareo, efa nohamasinina hianareo, efa nohamarinina hianareo, tamin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo sy tamin’ny Fanahin’Andriamanitsika.” – 1 Kôr. 6:11. Koa satria manamasina antsika Izy, dia mampitombo antsika eo amin’ny fiainantsika koa. Manao izany amin’ny fampitomboana ny vokatry ny Fanahy ao anatintsika Izy. “Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany.” – Gal. 5:22,23.
Araka izay nohazavain’i Ellen G. White hoe: “Homena ny Fanahiny Masina hiasa ho famelombelomana, ary raha tsy Izy dia tsy hisy vokany ny sorona nataon’i Kristy. Efa nitombo hery nandritra ny taonjato maro ny herin’ny ratsy, ary nahagaga ny fileferan’ny olona tamin’ny famaboana nataon’i Satana. Tsy azo toherina sy resena ny fahotana raha tsy amin’ny alalan’ny fiasa maherin’Ilay persona fahatelo amin’ny firaisan’Andriamanitra, Izay tsy hovana ny heriny raha ho avy Izy, fa amin’ny fahafenoan’ny herin’Andriamanitra no hiaviany. Ny Fanahy no mampisy vokany izay efa notanterahin’ny Mpanavotra an’izao tontolo izao.” – IFM, t. 724.
Hita tokoa fa manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fiainan’ny mpino ny Fanahy Masina. Noho izany, ny lesona amin’ity telovolana ity dia hanampy antsika bebe kokoa amin’ny fahatakarana ny fanomezan-dehibe nomena antsika ao amin’ny Fanahy Masina.
I Frank M. Hasel, manana ny mari-pahaizana Ph.D, dia talen’ny Departemantan’ny Teôlôjia any amin’ny semineran’i Bogenhofen any Autriche, Eorôpa. Izy koa no talen’ny ivon-toerana fandinihana ny asasoratr’i Ellen G. White. Tamin’ny taona 2009, dia maty noho ny aretina homamiadana ny vadiny. Nanomboka tamin’izay fotoana izay dia nianatra ny nitoky tamin’ny fahatsaran’Andriamanitra tamin’ny fomba vaovao isan’andro izy. Miaina ny fampaherezana, ny fiadanana, ary ny herin’ny Fanahy Masina izay manova fiainana izy, satria mitoky amin’Andriamanitra.